म्यान्मा’रको सेनाद्वारा गौतम दम्पत्तीको गो’ली हा’नी ह’त्या - TheSidhaKura
म्यान्मा’रको सेनाद्वारा गौतम दम्पत्तीको गो’ली हा’नी ह’त्या
By thesidhakura | April 13, 2021
म्यान्मारको सै’न्य सरकारले हा’ने’को गो’ली लागि दुई गो’र्खा’ली (ने’पालीभाषी) को नि’ध’न भएको छ।
भारतसँग सीमा जो’डिएको म्या’न्मारको टमू’नगरमा बसोबास गर्ने गौतम दम्पत्ती कृष्ण गौतम र हरिमाया गौतमलाई जु’न्ता सरकारले नियन्त्रणमा लि’एर ह’त्या गरेको छ।
नेपाली’भा’षी वरिष्ठ साहित्यकार लक्ष्मण न्यौपानेले रं’गुनबाट दिएको जानकारी अनुसार गौतम द’म्पत्ती दुध व्य’वसाय गरेर बसेका थिए। ‘नेपालीभा’षी दम्पत्तीलाई सै’निक प’रिषद्का सदस्यले गो’ली हा’नी ह’त्या गरेका छन्’, ब’र्मे’ली समाचारमाध्यम आ’रएफ’ए ब’र्मि’जले पनि यस कुराको पुष्टि गरेको छ।
‘उनीहरु दुध वितरण गर्न मोटरसाइकलमा नि’स्कि’एका थिए। सोही क्रममा सेनाले अ’न्धा’धु’न्ध गो’ली प्र’हा’र गरेको थियो,’ ब’र्मे’ली नेपाली तुलसीराम खनालले भने। उनीहरूको तीन जना छोराछोरी छन्। टमू’न’गरमा साढे तीन सय ने’पालीभाषी ब’सोबा’स गर्छन।
प्र’जाता’न्त्रिक आ’न्दो’ल’नमा नेपालीमू’लका तीन जना गो’र्खाहरूले हालसम्म ज्यान गु’मा’इसकेका छन्। यसअघि सान रा’ज्य’को उत्तरी क्षेत्र मु’सेन’गर हो’मुन ग्रा’ममा ४३ वर्षीय सा’नाभाइ विश्वकर्मालाई स्था’नी’य प्रहरीले नि’यन्त्रणमा लिएर कु’ट’पि’ट गरी ह’त्या गरेको थियो। बीएल नेपाली सेवा
सबैको जानकारीको शेयर गर्नुहोस !!!
शेयर गर्नुहोस !!!
← सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री ओली ३६४ दिन गयल ! सरकारले ल्याउँदै नयाँ नियम, बाटोमा हिँड्दा मोबाइल चलाउन नपाइने →
इन्द्रेणीकी गाईका खिमा रोका मगरले यसरी गरिन विवाह
सुटुक्क विवाह गरेर अमेरिका उडिन् मोडल रश्मी
नेपालमा कोरोना महामारी नियन्त्रणमा छ : प्रधानमन्त्री ओली
शुभ विवाह लेख्दै गाडी चलाउदै !
देश महामारीमा फसेको बेला, दोलखा भीमसेनलाई पसिना